पत्रपत्रिकामा देश : डायलाइसिस कि प्रत्यारोपण ?
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपत्रपत्रिकामा देश : डायलाइसिस कि प्रत्यारोपण ?
विराटनगर १८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपचार अब कसरी गर्ने भन्नेबारे टुंगो नलागेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘डायलाइसिस कि प्रत्यारोपण ?’ शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ ।
के गर्ने भन्ने विषयमा चिकित्सकहरुले परामर्श जारी राखेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सचिवालय सदस्य सुवास नेम्बाङले प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार पद्धतीको विषयमा टुंगो नलागेको बताए । उनले अहिले डायलाइसिस सजिलै हुने भएको कारण त्यही गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्री आफैले भने डायलाइसिस भन्दा दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको विषयमा सोचिरहेको बताएका छन् ।
यद्यपी वृद्ध उमेरमा पुनप्रत्यारोपण भन्दा डायलाइसिस नै सहज विकल्प हुने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका उपचारमा संलग्न डाक्टरहरु यसअघि उपचार गराएको सिंगापुर नेसनल हस्पिटलका डाक्टरहरुसँगपनि परामर्शमा छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री छिट्टै सिंगापुर जाने संकेत गरे ।
प्रहरीकै खुलासाः एसपी र आलमको सल्लाहमा घाइतेलाई भट्टामा हालिएको थियो शिर्षकमा मुख्य खबर छ । नेपाल प्रहरीका बहालवाला इन्स्पेक्टर तथा रौतहटमा कार्यरत तत्कालिन सइ ईश्वरविक्रम शाहले अनुसन्धानकर्तालई भनेका छन् ‘विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई इँटाभट्टामा हालेपछि घटना सामसुमपार्न सकिन्छ भनेर सशस्त्रका एसपी रामकृष्ण लामा, नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने र आलमबीच सल्लाह भएको हो ।’
अधिकारकर्मीहरुको प्रतिवेदनमापनि बम विस्फोटका घाइतेलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा ट्याक्टरमा हालेर इँटाभट्टा पुर्याइएको उल्लेख छ ।
रौतहट बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद तथा कांग्रेस नेता महम्मद अफताव आलमविरुद्ध सोमबार(आज) मुद्धा दायर हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीसहित ११ जनाविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबी गर्दै मुद्धा हाल्ने तयारी गरेको हो ।
नागरिक दैनिकले सातै प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रमुखहरु पदमुक्त भएका छन् । आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुुक्त गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेकी हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा सुनकोशी नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु भएको र ५२ जना घाइते भएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । यात्रुको भारले बस नदीमा खसेको समाचारमा उल्लेख छ । अरनिको राजमार्गको सुकुटे नजिकै सुनकोशी नदीमा बा २ ख ७२४५ नम्बरको बस खसेको थियो ।